कसिलो लुगा लगाउनुहुन्छ ? होशियार हुनुहोस्: निम्तिन सक्छ यस्तो खतर`नाक रोग – Nayabook
कसिलो लुगा लगाउनुहुन्छ ? होशियार हुनुहोस्: निम्तिन सक्छ यस्तो खतर`नाक रोग
अहिलेको युवा`पुस्ताको रोजाईमा पर्दछ, कसि|लो लुगा । त्यसमा पनि टाइट जिन्स र टिसर्ट अहिलेको युवायुवतीको पहिलो रोजाई नै बनेको छ । तर यो रोजाई फेसन भए पनि स्वास्थ्यमा भने ख|तरनाक साबित हुनसक्छ ।
कसिलो लुगाले खुट्टा सुन्निनदेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य गम्भी|र स`मस्या निम्त्याउन सक्छ । चिकित्सकका अनुसार कसिला जीन्स, टिर्सट, पेन्सिल स्कर्ट, ब्रा र टाईले नसासम्बन्धी सम`स्यादेखि क्यान्स`रसम्म हुनसक्छ ।कसि`ला लुगा लगाउँदा शरी|रको नसाहरु द`बिने गर्दछ ।
तसर्थ यस्ता कसिला लुगा वा विशेषगरी जिन्स पाइन्टले नशाको र`क्त प्रवाहमा अ`सर पार्दछ । जसका कारण तिघ्रामा पी`डा बढाउँछ । विशेष गरी यसले महिलाको पेल्भिक क्षेत्रमा बढी असर पार्दछ । कसिलो लुगाले तिघ्राको वरपर र पछाडिको भागमा पोल्ने पनि हुन्छ ।
टाइट पाइन्ट र स्कर्टले शरीरका मांश`पेशी र जोर्नीमा असर पार्दछ । यस्ता कसिला कपडा लगाएर झुक्दा र बस्दा तत्काल असर नदेखिन सक्छ । तर लामो समयसम्म यस्ता लुगा लगाई हिँड्डुल गर्दा दीर्घ`कालीन रुपमा नै हिप|लाई असर पार्दछ ।
घाँटीमा लगाइने कसिलो टाईले लामो समय`सम्म घाटीमा दुखाई हुनेदेखि मांश`पेशीका नसा दुख्ने गर्दछ । घाटी कसिलो हुदाँ आँखा दु`ख्नुका साथै ग्लुकोमा रो€ग पनि लाग्न सक्छ । साथै लामो समयसम्म क|सिलो टाइ लगाउने व्यक्तिको घाटी वरपरको नसामा बढी संवेदना बढाउँछ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
र यो पनि नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस्
प्राय:मनिसहरुले आफ्नो हातको रेखा हेरे’र भविष्य हेर्ने गर्छन । आ’फ्नो दिन चर्य कसरी बित्ने छ भने पनि हात हेर्ने गर्दछन । त्यति मात्रै होइन तपाईको हात हेरेर तपाईको स्वास्थ्यबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।हातको प्रत्यक नङमा रहेको से’तो आधा चन्द्रमा निशान’बाट पनि तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर पत्ता ल’गाउन सकिन्छ ।
नङको तल्लो भागमा सेतो आधा चद्र बनेको हुन्छ । नङको अरु भागभन्दा त्यो भाग अलि धेरै सेतो हुनेगर्छ । त्यो नंङको एउटा प्रमुख भाग पनि हो । यस भागलाई लेटिन भाषामा ‘लुनुला’ भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा सानो चन्द्र पनि भनिन्छ । यो निशान कुनै डि’जाइन भने होइन । यसले तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने रहस्य खोल्छ ।
चीनको परम्परागत स्वास्थ्य समुदायमा कसैको स्वा’स्थ्य मापन गर्ने ब्यारो’मिटरको रुपमा लिइन्छ । लुनुलाले तपाईको स्वास्थ्य स्थितिबारे बताउने गर्छ । यदी तपाईको स्वास्थ्य ठीक छैन भने यी निशानहरु तपाईको नङमा देखि’दैनन् ।स्वास्थ्य’मा सुधार भए लगत्तै यी निशानहरु तपाईको नङमा पुन देखिन थालछन् ।
यदी तपाईको १० औलामध्ये ८ वटा नङमा लुनुला सेतो रंगमा छन् भने तपाईको स्वास्थ्य एकदम ठीक छ । तपाईलाई टेन्सन लि’न जरुरत छैन ।
लुनुला कम हुँदैछ
यदि तपाईको नङमा लुनुलाका निशान’हरु हराउँ’दै गएका छन् र बुढी औला’मात्र निशान छ भने तपाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजक हुने अवस्था आएछ भन्ने बुझ्नु’पर्छ । तपाई छिट्टै नै बिरामी हुने संकेत भएको यसले देखाउँछ ।
यी चार रा’शिः ज’स’ले नि’कै ध’न क’मा’उँ’ने’छ’न्, क’तै त’पा’इँ’काे प’र्याे की ?
निःसन्तानलाई सन्तान दिने र जोडी जुराउने दुप्चेश्वरलाई दर्शन गरी सेयर गरौं
जिउँदो दाहिने शंख देख्ने वित्तिकै भाग्य चम्किन्छ, सेयर गरौं !
सु’त्नु प’हि’ले सि’रा’नी’मु’नी राख्नुस् यी पाँ’च चिज, रा’ता’रा’त च’मा’त्का’र हुनेछ !
छि’ट्टै बि’र्स’ने बा’नी छ ? त्यसो भए खा’नु’हो’स् यस्ता खा’ने’कु’रा